इलाममा अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या
समाचारशुक्रबार, २७ पौष , २०७५
३ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य २६ पुस रातिदेखि बिग्रिन थालेको छ।
यसअघिको सम्झौताअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्नेलगायत मागसहित २५ पुसदेखि डा. केसीले इलाम सदरमुकाममा अनशन शुरु गरेका छन्। विस्तारै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको उनको हेरचाहमा रहेका डा. रामकृष्ण आचार्यले बताए।
उनका अनुसार डा. केसीको रक्तचाप कम हुँदै गएको छ भने शरीरमा चिसो पसिना आउने, हात थर्थराउने, छाति दुख्ने र खोकी लाग्ने समस्या देखिएको छ।
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदै गएको छ भने ‘इलेक्ट्रोलाइट्स’को कमीका कारण नसामा क्यानुला राख्न सकिएको छैन। हालसम्म मुटुको चाल भने सामान्य छ। कुनै पनि बेला मुटुको चाल असामान्य हुनसक्ने भएकाले जिल्ला अस्पताल इलामका चिकित्सकसहितको टोलीले निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ।
युवा र महिलाको मौन जुलुस
डा. केसीका मागहरू प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै इलामका युवा र महिलाले सदरमुकाममा मौन जुलुस निकालेका छन्। डा. केसीको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरू अनशनस्थलमा भेला भएका छन्।
२७ पुसमा अनशनस्थलबाट उनीहरूले ‘डा.केसी कुनै दलका होइनन्, सबै दलसँग लड्दै आएका छन्’ लगायत लेखिएका प्ले कार्ड र ब्यानरसहितको मौन जुलुस निकालेका छन्। उक्त जुलुस बजार परिक्रमापछि चोकबजारमा कोणसभा परिणत भएको थियो।